Dongguan Sweetoy အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Sweetoy တစ်ဘက်ပေါင်းစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါင်းစပ်များ၏ပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်အပေါင်းတို့နှင့်တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာထိပ်တန်းရောင်းအားဘာမှ sourcing နိုင်ပါတယ်။
2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ငါတို့တပ်မက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ Sweetoy ဖို့သီးသန့်အများအပြား, ထောက်ပံ့ရေးအစာရှောင်ခြင်းထိပ်တန်းအရည်အသွေးသည်လိင်ကစားစရာများနှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရောင်းချသောအရာကိုရောင်းနှင့်သာငါသိ၏။ ကျနော်တို့အယူအဆကနေထုံးစံသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ပြင်အထုပ်ဒီဇိုင်းကိုမှကူညီပေးပါမည်သူကိုလွတ်လပ်သောဒီဇိုင်းနှင့် R & D အဖွဲ့ရှိသည်။ သငျသညျထုံးစံအထုပ်ကိုအနည်းဆုံး 500pcs တစ်ခုချင်းစီမော်ဒယ်မယှဉ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံဝန်ဆောင်မှု MOQ သာ 100pcs ဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းထိုသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အသငျသညျစတင်ရေးသားရန်အတွက်လက်အပေါ်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထား, အသင်းရှိရိုးရှင်းစွာ sign up ကိုသင်ထိုနေ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျလမျးညှနျခသို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လွန်းကဝန်ဆောင်မှုအားလုံးစိတျအပိုငျးရဲ့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
website ကအင်္ဂါရပ်တွေကိုသုံးပါနှင့် PDF ကို catalog တိုက်ရိုက်ပစ္စည်းများအားလုံး Browse ကူညီပေးပါမည်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လွယ်ကူပါတယ်။ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်ပြန်လည်းအများအပြားမေးခွန်းများကိုဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပို့ပေးရန်မလိုအပ်။ ရိုးရှင်းစွာအအချိန်အများကြီးကယ်တင်မည်သင့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်အီးမေးလ်ကိုအတူတက်လက်မှတ်ထိုး။
ဝန်ဆောင်မှုအနိုင်ရရှိမှုဆုချီးမြှင့် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စံနမူနာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုငျရနျမာနထောင်လွှားနေနှင့်လည်းထိုသို့ဆုခခြံခံရ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များစေသည်ဘယ်အရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ယနေ့အကောင့်တစ်ခု sign up ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့ကြိမ် items-- 1-3 နေ့ရက်များစိတ်တိုင်းကျပစ္စည်းများထွက်တင်ပို့နိုင်သရိုးရှင်းစွာမယှဉ်နိုင်တဲ့စတော့အိတ်များမှာ - 7-10 နေ့ရက်များအတွက်အမြန်ဆုံးထွက်တင်ပို့နိုင်သလား။ ကုန်သွယ်ရေးအသုံးအနှုန်းများ, သင်တို့အပေါ်မှာ EXW မူတည် FOB, CIF, DDU ... အားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ site ကို downloads - ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုရှိသလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ downloads, စာမျက်နှာသင့် site ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်ဒေတာ Feeds နဲ့ပုံရိပ်တွေပါရှိသည်။
စုံတွဲများသည်လိင်ကစားစရာ , Wand တုန်ခါ , Best Sex Toys For Men, Strap On Dildo, Sex Swing, Nipple Sucker,